Dropbox na-ekwupụta ndị ọrụ nde 500 edebanyere aha na ọrụ ya | Gam akporosis
Dropbox nwere ugbu a karịa ndị ọrụ ndebanye aha 500 nde
Nyaahụ anyị zutere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu maka otu n'ime ụlọ egwuregwu vidio nke kachasị mma n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Supercell egosiputa nnukwu ike ya na nzọ anọ ya na Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day na Boom Beach ruru nde mmadụ 100 ụnyaahụ ndị na-egwu egwuregwu vidio ha kwa ụbọchị.
Ọnụ ọgụgụ nke na-ewetara anyị nso na nke ọzọ dị oke mkpa maka otu ọrụ nchekwa igwe ojii kachasị mma na nke anyị niile maara site na Dropbox. Taa, anyị maara na ọrụ a eruola nde ndị ndebanye ndebanye nde 500 taa mgbe mmalite afọ nwere nrụnye nde 500 na Playlọ Ahịa Google.
Nsogbu dị na ọnụ ọgụgụ nke nbudata na Playlọ Ahịa Google bụ nke ahụ na-anakọta oge ebudatara ngwa ahụ, nke gunyere mmelite nke ụdị arụnyere, nke pụtara na anyị enweghị ike ịmata ọnụọgụ nke ndị ọrụ edebanyere aha, dị ka a ga - asị na anyị nwere ike ịmata taa na ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ahụ kesara.
Ihe karịrị nde mmadụ 500 abanyela na ọrụ nchekwa ahụ ụlọ ọrụ malitere na 2008 na folda na mekọrịta ọdịnaya dị na ha. Dropbox dabeere na United States, mana ọ hụwo mgbasawanye dị n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Companylọ ọrụ ahụ nwere Brazil, Germany, India na United Kingdom dị ka mba ebe ọtụtụ ndị ọrụ sonyeere ọrụ ahụ iji ruo ndị nde 500 ndebanye aha ha. Ọ bụ kpọmkwem pasent 75 nke ndị ọrụ sitere na mpụga United States.
Typedị ọrụ achọtara na a oge nke nnukwu asọmpi na dị iche iche eme ihe nkiri dị ka Apple, Google na Microsoft àjà-akpali nnọọ mmasị ojii nchekwa nhọrọ. Maka ugbu a, Dropbox na-aga n'ihu na-eto, nke ka na-ekwe nkwa ọdịnihu dị ukwuu ebe ndị ọrụ ndị ọzọ na-emechi ụzọ ha.
Dropbox: Cloud Datei, Onye na-ekwu okwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Dropbox nwere ugbu a karịa ndị ọrụ ndebanye aha 500 nde
N'ikpeazụ Kamcord na-enye ụzọ maka iyi iji nweta ego
Facebook Messenger mechara nata Nhazi ihe